Ihe edemede Kevin Mullett na Martech Zone |
Edemede site na Kevin Mullett
LinkedIn yiri ka ọ na-anwale ọkwa ihu igwe n'ofe mpaghara mmanya isi. Kemgbe ụnyaahụ, na-atụgharị uche na akara ngosi ihu igwe na-egosi na ọrụ ahụ bụ "Ike site na sun365", ndị na-eme ndọtị Google Chrome na ebe nrụọrụ weebụ dashboard ihu igwe sun365.me. Ee, ee, ha na-ekwu “ike,” ọ bụghị “n'ike.” Nke a dị ka nnwale ule pere mpe pere mpe, ma ọ bụ iwepu nwayọ nwayọ, ebe m na-enweghị ike ịchọta ọbụlagodi onye ọzọ
Nke a agaghị abụ ọkwa ọzọ na - agba gị ume ka ị gaa guzobe Google Plus Page maka azụmaahịa gị ozugbo, ọ gaghị enyekwa gị otu esi eme ya. N'eziokwu, nke ahụ bụ ihe m na-atụ anya ịtụ aro na mwepụta nke Google+, na agbanyeghị nkwadebe m maka webinar na njedebe ahụ, aghaghị m n'ezie ịnye ihe ọzọ offer maka ugbu a. Gịnị ma ị banye naanị na mmiri? Ọfọn, mgbe anyị kwesịrị ikwe ka